QM: Xubnaha Baarlamaanka Waa in Dhaqso loo soo xulaa
Warbxin ka soo baxday xubnaha Golaha Amaanka ee QM ayaa soo dhawaysay hormarka dhawaan laga gaaray dhamaystirka hanaanka ku meelgaarka ah ee Somalia, gaar ahaan waxa uu guluhu soo dhaweeyey ansixintii Golaha Ergooyinka Qaranka ay ansixiyeen dastuurka Soomaaliya.
Xubnaha Golaha Amaanku waxa ay ugu baaqeen ka qayb galayaasha hanaanka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya inay hubiyaan soo xulitaanka xubnaha cusub ee golaha baarlamaanku inay u qabsoonto sida ugu dhaqsiyaha badan. Warbixintan ka soo baxday xubnaha Golaha Amaanka ayaa hoosta ka xariiqday muhiimada guddiga farsamada ee soo xulitaanka xubnaha Baarlamaanka,
Xubnaha Golaha Amaanka ayaa si xoogan u dhaleeceeyey isku dayga kooxda Alshabaab ay isku dayeyso inay isku hortaagto hanaanka kala guurka, waxayna xuseen in golaha amaanku uu doonayo inuu qaado talaabooyin ka dhan ah kooxaha gudaha iyo dibada ee damacsan inay horistaagaan hanaanka nabada iyo dib uheshiisiinta.
Warbixinta Golaha Amaanka ee QM ayaa amaan loogu soo jeediyey ciidamda AMOSOM iyo kuwa Soomaaliya geesinimadooda iyo kaalintooda muhiimka ee ay ku sahleen in saxiixayaasha Roadmapkku ay helaan meel amaan ah oo ay ku fuliyaan hanaanka xiliga kala guurka, guluhu waxaa kale oo uu ku celiyay muhiimada ay leedahay in masuuliyiinta Soomaalidu ay ka hirgaliyaan qaab dowladeed oo sharci ah goobihii ay hore gacanta ugu hayeen kooxda Alshabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan.
Golaha Amaaanka ayaa ugu baaqay dhamaan saxiixayaasha iyo xubanaha la soo magacaabayo ee baarlamaanka inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo dhameys-tiraan howlaha ka dhiman Raodmapka.